ပွညျပပို့ကုနျဈေးကှကျကို ဘယျလိုရှာဖှမေလဲ ? - Logistics Guide
ပွညျပသို့ကုနျပစ်စညျးတငျပို့ရနျ ကွိုးပမျးခွငျးသညျ မညျသညျ့ပို့ကုနျလုပျငနျးအတှကျမဆို အဓိကကသြော လုပျငနျးတဈခုဖွဈသညျ။ တဈဦးခငျြးလုပျငနျးဖွဈစေ၊ အစုအဖှဲ့လုပျငနျးဖွဈစေ ပွညျပမှ Export order ရရှိရေးအတှကျ နညျးဗြူဟာရှိသငျ့သညျ။ Export order မရရှိဘဲ မညျသညျ့ကုမ်ပဏီမှ ရပျတညျရနျမဖွဈနိုငျခြေ။ ပွညျပပို့ကုနျလုပျငနျးကွီးတဈခု၏ ဦးစားပေးအလုပျတဈခုအနဖွေငျ့ ၎င်းငျး၏ထုတျကုနျ ပစ်စညျးမြားကို ရောငျးခရြနျ Export order ရရှိရေး မဟာဗြူဟာအပျေါ အာရုံစိုကျသငျ့သညျ။
● Export order ဘယျလိုရမလဲ ?
ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာစနဈသညျ လှနျခဲ့သညျ့ဆယျစုနှဈ နှဈစုစာမှစတငျပွီး လူသားတဈဦးခငျြးစီကို ပွောငျးလဲပဈခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ သတငျးအခကျြအလကျနညျးပညာသညျ ကဏ်ဍအားလုံးအတှကျ အရေးပါသောအပိုငျးတှငျ ပါဝငျလာပွီး အထူးသဖွငျ့ နိုငျငံတကာနှငျ့ခြီသော စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ ပိုမိုအရေး ပါသညျ။ ၁၉၉၀ ဝနျးကငျြမတိုငျမီကာလမြားတှငျ ပွညျပဝယျလကျ ရရှိရေးသညျ အလှနျခကျခဲသော၊ အားစိုကျခှနျစိုကျလုပျဆောငျရသော အလုပျတဈခုဖွဈသညျ။ သို့သျော ယနခေ့တျေကမ်ဘာကွီး သညျ အရာရာကို ပွောငျးလဲပဈလိုကျလပွေီ။ ပွညျပဈေးကှကျရရှိရေးအတှကျ အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုကို အကြိုးရှိစှာအသုံးခခြွငျး သညျ ပထမဦးစှာဆောငျရှကျရမညျ့အလုပျဖွဈသညျ။
● အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုကို ဘယျလိုအသုံးခမြလဲ ?
အဆငျ့မီကောငျးမှနျသော ဝကျဘျဆိုဒျတဈခု တညျထောငျလှငျ့တငျခွငျး (သို့) ပွညျပပို့ကုနျလုပျငနျးနှငျ့ ဆကျစပျသော ဝကျဘျဆိုဒျတဈခုနှငျ့ ခြိတျဆကျခွငျးသညျ သငျ့ထုတျကုနျအတှကျ ပွညျပ ဈေးကှကျရှာဖှရေနျ အကြိုးမြားစသေညျ။ သငျ့ထုတျ ကုနျနှငျ့ပတျသကျသော လိုအပျသညျ့အခကျြအလကျမြားကို အခြိနျနှငျ့တဈပွေးညီ Update လုပျနရေနျလညျးလိုအပျပါသညျ။ သို့မှသာ သငျ့ ထုတျကုနျ၊ သငျ့လုပျငနျးအပျေါ အမြား၏အာရုံစိုကျခွငျး၊ ယုံကွညျ လကျခံခွငျး၊ အလေးဂရုပွုခွငျးကို ရရှိမညျဖွဈသညျ။ သငျ့ထုတျကုနျ၊ ထုတျလုပျမှုပုံစံ၊ ထုတျလုပျမှုနညျးစဉျတို့ကို ဓာတျပုံမှတျတမျးမြား၊ Video clip မြားဖွငျ့ လှငျ့တငျခွငျးဖွငျ့ နိုငျငံတကာဈေးကှကျက သငျ့ထုတျကုနျအပျေါ အာရုံစိုကျလာစသေညျ။
သငျ့ထုတျကုနျနှငျ့အလားတူ ထုတျကုနျလုပျငနျး ထုတျလုပျသူမြားကို ရှာဖှရေနျ အတှကျသျောလညျးကောငျး၊ သငျ့ထုတျကုနျလုပျငနျးအသေးစိတျ ကိုဖျောပွရနျအတှကျသျောလညျးကောငျး Search Engine အသုံး ပွုရှာဖှခွေငျးသညျမရှိမဖွဈအရေးပါသညျ။ facebook , Twitter မြားတှငျ လှငျ့တငျခွငျး၊ Youtube, e-magazine မြား တှငျဖျောပွ ခွငျးသညျ ပွညျပဈေးကှကျတိုးခြဲ့ရနျ မဖွဈမနလေုပျဆောငျရမညျ့ ကိစ်စမြားဖွဈသညျ။ အငျတာနကျဝနျဆောငျမှုကို အသုံးခြ၍ ရေး သားဖျောပွခွငျး၊ ဈေးကှကျရှာဖှခွေငျးသညျ ကုနျသှယျမှုနှငျ့ပတျ သကျ၍ သငျမညျမြှဆောငျရှကျနိုငျသညျ၊ သငျ့လုပျငနျးပမာဏ မညျမြှရှိသညျ၊ သငျ့လုပျငနျးအပျေါ မညျသို့ယုံကွညျနိုငျသညျဟူ သော အခကျြမြားကို သိရှိစနေိုငျသညျ။
● ထိရောကျသော ခြိတျဆကျဆောငျရှကျမှု ?
သငျ့ထုတျကုနျအတှကျ အမှနျတကယျဈေးကှကျရရှိစမေညျ့ ပွညျပဈေးကှကျရရှိအောငျ ဆကျသှယျဆောငျရှကျပေးနိုငျမညျ့အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ထိရောကျစှာ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျခွငျးသညျ ဈေးကှကျရှာဖှခွေငျးအတှကျ အရေးပါသော လုပျ ဆောငျခကျြဖွဈ သညျ။ သငျ့ထုတျကုနျ၏ ဈေးနှုနျးနှငျ့ အရညျအသှေးကို Buyer မှ လကျခံယုံကွညျလာစရေနျ ထိရောကျသော ခြိတျဆကျဆောငျရှကျ မှုလိုအပျသညျ။ ထိုမှတဈဆငျ့ Buyer မြားက သငျ့ထုတျကုနျကို နမူနာပေးပို့ရနျ တောငျးဆိုခွငျး၊ ကုနျပစ်စညျး order မှာယူခွငျးမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျလာမညျဖွဈသညျ။
● ကုနျပစ်စညျးနမူနာပေးပို့ခွငျး ?
ကုနျပစ်စညျးနမူနာပေးပို့ခွငျးသညျ Buyer တဈဦးခငျြးစီ၏ လိုအပျခကျြဖွဈနိုငျသညျ။ ထုတျကုနျပစ်စညျးနမူနာ ပေးပို့ရာတှငျ ပေးပို့ရမညျ့ နမူနာပစ်စညျးကို အနညျးဆုံးနှဈစုံစာ ပွုလုပျထားသငျ့ သညျ။ တဈစုံသညျ Buyer ထံသို့ပေးပို့ရနျဖွဈသညျ။ ကနျြတဈစုံမှာ သငျ့လကျဝယျထားရှိရနျဖွဈသညျ။ Buyer က နမူနာပေးပို့သော ပစ်စညျးအတိုငျး မှာယူလာသောကွောငျ့ အမြားအပွား ထုတျလုပျ ရလြှငျသျောလညျးကောငျး၊ Buyer တောငျးဆိုမှုဖွငျ့ အနညျးငယျ ပွနျလညျပွငျဆငျရနျ လိုအပျလာလြှငျသျောလညျးကောငျး သငျ့ လကျဝယျထားရှိသော နမူနာထုတျကုနျပစ်စညျးကို အသုံးပွုရမညျ ဖွဈသညျ။
● ကုနျစညျပွပှဲမြားတှငျ ပါဝငျပွသခွငျး ?
' ကုနျစညျပွပှဲ' နှငျ့ 'ဈေးရောငျးပှဲတျော' မတူပါ။ ဈေးရောငျး ပှဲတျောဆိုသညျမှာ ကုနျပစ်စညျးအမွောကျအမွားကို တဈနရောတညျးမှာ စုစညျးရောငျးခခြွငျးဖွဈပွီး ရောငျးသူနှငျ့ ဝယျသူ တှေ့ ဆုံကာ ရောငျးကွဝယျကွရုံသာဖွဈသညျ။ လကျလီကိုဦးစားပေးသော သဘောဖွဈသညျ။ ကုနျစညျပွပှဲဆိုသညျမှာ ရညျရှယျခကျြ မြားစှာ ပိုမိုလေးနကျပါသညျ။ ထုတျလုပျသူနှငျ့ဝယျသူ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျပေးသော နရောလညျးဖွဈသညျ။ ထုတျလုပျသူက ဝယျသူကိုရှာပွီး ဝယျသူကလညျး ထုတျလုပျသူရှာဖှသေော နရောဖွဈ သညျ။ ကုနျစညျပွပှဲမြားမှာ တဈစုတဈစညျးတညျး တှဆေုံ့နိုငျပွီး ရရှေညျအကြိုးစီးပှားအတှကျ ရရှေညျပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားအတှကျဆှေးနှေးကွရသညျ။
မိမိထုတျကုနျသညျ အခွားထုတျကုနျ တဈမြိုးအတှကျ ကုနျကွမျးဖွဈနနေိုငျသညျ။ ကုမ်ပဏီနှဈခုမှ ထုတျ ကုနျနှဈခုပေါငျးစပျပွီး ထုတျကုနျအသဈတဈခု ပျေါထှကျလာနိုငျသညျ။ တငျပို့မှု၊ တငျသှငျးမှုမြား ပိုမိုမြားပွားလာမညျ။ ရောငျးခသြူ အနဖွေငျ့မဟုတျဘဲ ထုတျလုပျသူအနဖွေငျ့ Buyer ရှာသောနရော ဟု ပွောနိုငျပါသညျ။ သငျ့ထုတျကုနျကို ကုနျစညျပွပှဲမြားတှငျ ပါဝငျပွသဖို့လိုပါ သညျ။ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပ နှဈမြိုးစလုံးတှငျ ကငျြးပပွုလုပျလကျြရှိ သော အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကုနျစညျပွပှဲမြားစှာရှိပါသညျ။ ၎င်းငျး ကုနျစညျပွပှဲမြားတှငျ ပါဝငျပွသခွငျးဖွငျ့ သငျ့ထုတျကုနျကို ပွညျပ ဝယျလကျမြားနှငျ့ ခြိတျဆကျနိုငျသညျ။
● ပွညျပပို့ကုနျမွှငျ့တငျရေး အဂေငျြစီမြား ?
ပွညျပပို့ကုနျမွှငျ့တငျရေး အဂေငျြစီမြား၊ အဖှဲ့အစညျးမြား၏ အခနျးကဏ်ဍသညျလညျး လှနျစှာအရေးပါသညျ။ ၎င်းငျးတို့တှငျ နိုငျငံတကာအဆငျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးဆိုငျရာ အဆကျအသှယျ အခြိတျအဆကျမြားစှာတို့၏ ရငျးမွဈမြားရှိသညျ။ ကုနျသှယျမှုဆိုငျ ရာဈေးကှကျကို သငျ့အား လမျးညှနျပေးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ သငျ့ ထုတျကုနျအတှကျ Buyer ရှာဖှပေေးခွငျးဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ဝနျဆောငျ မှုကို ရရှိနိုငျမညျ။
၎င်းငျးသညျလညျး ပွညျပဈေးကှကျရှာဖှရေေးအတှကျ အဖှဲ့ဝငျမြားကို ဈေးကှကျရရှိရေး အကူအညီပေးသညျ့ အခနျးကဏ်ဍအတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျပါသညျ။
နိုငျငံတကာသံရုံးမြားသညျလညျး သငျ့ထုတျကုနျအတှကျ ၎င်းငျးတို့နိုငျငံအသီးသီးတှငျ ဈေးကှကျရရှိရေးနှငျ့ exporter မြားအတှကျ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျးတို့ ဆောငျရှကျပေးနိုငျသော ဌာနမြားဖွဈသညျ။
● Buyer နှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး
သငျ့ထံတှငျ Personal Contacts မြားရှိမညျဆိုပါက Buyer နှငျ့ တိုကျရိုကျတှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျးသညျ စီးပှားရေးလုပျငနျးဆိုငျရာ ကောငျးမှနျသောဆကျဆံရေးကို ဖွဈစသေညျ။
● အေးဂငျြ့တဈဦး သတျမှတျတာဝနျပေးခွငျး
အခြို့သော Exporter မြားအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့ကုနျပစ်စညျး တငျပို့ရနျသတျမှတျထားသညျ့ နိုငျငံတှငျ အေးဂငျြ့တဈဦးကို သီးသနျ့ တာဝနျပေးခနျ့အပျထားလရှေိ့သညျ။ ၎င်းငျးအေးဂငျြ့မြားမှတဈဆငျ့ ကုနျပစ်စညျးတငျပို့ရနျ order မြားရလရှေိ့သညျ။ ဝနျဆောငျမှုအားလုံး ကို ၎င်းငျးအေးဂငျြ့မြားထံမှရရှိနိုငျပွီး လိုအပျလြှငျ နညျးပညာပွဿနာ မြားကိုလညျး ၎င်းငျးတို့က ဖွရှေငျးပေးနိုငျသညျ။ ကောငျးမှနျသော စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုကို ဖျောဆောငျ နိုငျပွီး Export order ရရှိစရေနျ အထကျဖျောပွပါ အခကျြမြားက အထောကျအကူဖွဈပါလိမျ့မညျ။
ပြည်ပပို့ကုန်ဈေးကွက်ကို ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ ?
ပြည်ပသို့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် မည်သည့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်မဆို အဓိကကျသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းလုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်စေ ပြည်ပမှ Export order ရရှိရေးအတွက် နည်းဗျူဟာရှိသင့်သည်။ Export order မရရှိဘဲ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှ ရပ်တည်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေ။ ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု၏ ဦးစားပေးအလုပ်တစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်း၏ထုတ်ကုန် ပစ္စည်းများကို ရောင်းချရန် Export order ရရှိရေး မဟာဗျူဟာအပေါ် အာရုံစိုက်သင့်သည်။
● Export order ဘယ်လိုရမလဲ ?
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာစနစ်သည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုစာမှစတင်ပြီး လူသားတစ်ဦးချင်းစီကို ပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာသည် ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် အရေးပါသောအပိုင်းတွင် ပါဝင်လာပြီး အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ချီသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုအရေး ပါသည်။ ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်မတိုင်မီကာလများတွင် ပြည်ပဝယ်လက် ရရှိရေးသည် အလွန်ခက်ခဲသော၊ အားစိုက်ခွန်စိုက်လုပ်ဆောင်ရသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီး သည် အရာရာကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်လေပြီ။ ပြည်ပဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း သည် ပထမဦးစွာဆောင်ရွက်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
● အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ ?
အဆင့်မီကောင်းမွန်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု တည်ထောင်လွှင့်တင်ခြင်း (သို့) ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် ပြည်ပ ဈေးကွက်ရှာဖွေရန် အကျိုးများစေသည်။ သင့်ထုတ် ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ Update လုပ်နေရန်လည်းလိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ သင့် ထုတ်ကုန်၊ သင့်လုပ်ငန်းအပေါ် အများ၏အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ယုံကြည် လက်ခံခြင်း၊ အလေးဂရုပြုခြင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်တို့ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ၊ Video clip များဖြင့် လွှင့်တင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်က သင့်ထုတ်ကုန်အပေါ် အာရုံစိုက်လာစေသည်။
သင့်ထုတ်ကုန်နှင့်အလားတူ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း ထုတ်လုပ်သူများကို ရှာဖွေရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ သင့်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအသေးစိတ် ကိုဖော်ပြရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း Search Engine အသုံး ပြုရှာဖွေခြင်းသည်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ facebook , Twitter များတွင် လွှင့်တင်ခြင်း၊ Youtube, e-magazine များ တွင်ဖော်ပြ ခြင်းသည် ပြည်ပဈေးကွက်တိုးချဲ့ရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စများဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးချ၍ ရေး သားဖော်ပြခြင်း၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည် ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ် သက်၍ သင်မည်မျှဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ သင့်လုပ်ငန်းပမာဏ မည်မျှရှိသည်၊ သင့်လုပ်ငန်းအပေါ် မည်သို့ယုံကြည်နိုင်သည်ဟူ သော အချက်များကို သိရှိစေနိုင်သည်။
● ထိရောက်သော ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု ?
သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် အမှန်တကယ်ဈေးကွက်ရရှိစေမည့် ပြည်ပဈေးကွက်ရရှိအောင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်စွာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက် အရေးပါသော လုပ် ဆောင်ချက်ဖြစ် သည်။ သင့်ထုတ်ကုန်၏ ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို Buyer မှ လက်ခံယုံကြည်လာစေရန် ထိရောက်သော ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မှုလိုအပ်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် Buyer များက သင့်ထုတ်ကုန်ကို နမူနာပေးပို့ရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း order မှာယူခြင်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
● ကုန်ပစ္စည်းနမူနာပေးပို့ခြင်း ?
ကုန်ပစ္စည်းနမူနာပေးပို့ခြင်းသည် Buyer တစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနမူနာ ပေးပို့ရာတွင် ပေးပို့ရမည့် နမူနာပစ္စည်းကို အနည်းဆုံးနှစ်စုံစာ ပြုလုပ်ထားသင့် သည်။ တစ်စုံသည် Buyer ထံသို့ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။ ကျန်တစ်စုံမှာ သင့်လက်ဝယ်ထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ Buyer က နမူနာပေးပို့သော ပစ္စည်းအတိုင်း မှာယူလာသောကြောင့် အများအပြား ထုတ်လုပ် ရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ Buyer တောင်းဆိုမှုဖြင့် အနည်းငယ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လာလျှင်သော်လည်းကောင်း သင့် လက်ဝယ်ထားရှိသော နမူနာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။
● ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခြင်း ?
' ကုန်စည်ပြပွဲ' နှင့် 'ဈေးရောင်းပွဲတော်' မတူပါ။ ဈေးရောင်း ပွဲတော်ဆိုသည်မှာ ကုန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားကို တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူ တွေ့ ဆုံကာ ရောင်းကြဝယ်ကြရုံသာဖြစ်သည်။ လက်လီကိုဦးစားပေးသော သဘောဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ပြပွဲဆိုသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက် များစွာ ပိုမိုလေးနက်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဝယ်သူ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးသော နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူက ဝယ်သူကိုရှာပြီး ဝယ်သူကလည်း ထုတ်လုပ်သူရှာဖွေသော နေရာဖြစ် သည်။ ကုန်စည်ပြပွဲများမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တွေ့ဆုံနိုင်ပြီး ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ဆွေးနွေးကြရသည်။
မိမိထုတ်ကုန်သည် အခြားထုတ်ကုန် တစ်မျိုးအတွက် ကုန်ကြမ်းဖြစ်နေနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ ထုတ် ကုန်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ တင်ပို့မှု၊ တင်သွင်းမှုများ ပိုမိုများပြားလာမည်။ ရောင်းချသူ အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် Buyer ရှာသောနေရာ ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်ကို ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသဖို့လိုပါ သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ နှစ်မျိုးစလုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိ သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲများစွာရှိပါသည်။ ၎င်း ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသခြင်းဖြင့် သင့်ထုတ်ကုန်ကို ပြည်ပ ဝယ်လက်များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
● ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီများ ?
ပြည်ပပို့ကုန်မြှင့်တင်ရေး အေဂျင်စီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍသည်လည်း လွန်စွာအရေးပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် အချိတ်အဆက်များစွာတို့၏ ရင်းမြစ်များရှိသည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင် ရာဈေးကွက်ကို သင့်အား လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့် ထုတ်ကုန်အတွက် Buyer ရှာဖွေပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင် မှုကို ရရှိနိုင်မည်။
၎င်းသည်လည်း ပြည်ပဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်များကို ဈေးကွက်ရရှိရေး အကူအညီပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာသံရုံးများသည်လည်း သင့်ထုတ်ကုန်အတွက် ၎င်းတို့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ဈေးကွက်ရရှိရေးနှင့် exporter များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ဌာနများဖြစ်သည်။
● Buyer နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
သင့်ထံတွင် Personal Contacts များရှိမည်ဆိုပါက Buyer နှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကို ဖြစ်စေသည်။
● အေးဂျင့်တစ်ဦး သတ်မှတ်တာဝန်ပေးခြင်း
အချို့သော Exporter များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့ရန်သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတွင် အေးဂျင့်တစ်ဦးကို သီးသန့် တာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားလေ့ရှိသည်။ ၎င်းအေးဂျင့်များမှတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရန် order များရလေ့ရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး ကို ၎င်းအေးဂျင့်များထံမှရရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်လျှင် နည်းပညာပြဿနာ များကိုလည်း ၎င်းတို့က ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖော်ဆောင် နိုင်ပြီး Export order ရရှိစေရန် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များက အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။